အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရင်ဖို လှိုက်မောဖွယ် ညို့အားပြင်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း – Zartiman
အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရင်ဖို လှိုက်မောဖွယ် ညို့အားပြင်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
ဆက်ဆီမော်ဒယ်မလေး နွယ်နွယ်ထွန်းက“ခုတလော အရမ်းတွေလှချင်လာတာ မင်းကြောင့်များလား??..” ဆိုပြီး ကျော့ရှင်းတဲ့အလှတ ရားတွေ အထင်းသားပေါ်လွင်နေပြီး မြင်သူတိုင်းကို အသည်းယားအောင် အချစ်ပိုစေတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိ ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်..။ အဲ့ဒီပို့သ်ရဲ့အောက်မှာ်တော့ ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်ကြတဲ့ Comment လေးတွေအပြင် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကပါ သဘောကျစွာ ချစ်ခင်အားပေးနေကြတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေး ချစ်ခင်မှုတွေကို အများဆုံးနဲ့အခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ မော်လ်ဒယ်မင်းသမီး ချောလေးတွေထဲမှာ ရစ်လို့အားလုံးက ချစ်နိုးခေါ်ကြတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကလည်း အပါအဝင်ပါပဲနော်..။ ညို့အားပြင်းပြီး အချိုးအစားကျတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ ဟန်ပန်လေးတွေနဲ့လည်း ဖမ်းစားတတ်တဲ့ ရစ်ရစ်က တော့ တကယ်ကိုဆိုးနွဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သူမရဲ့မခို့တရို့ဟန်ပန်ပုံရိပ်လေးတွေကို အမြဲမျှဝေလေ့ရှိတဲ့ ရသ်ရစ်ကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ကောက် ကြောင်းတွေကို အထင်းသားပေါ်လွကယင်နေတဲ့ အမိုက်စားပို့စ်ပေး ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အချစ်ပိုစေပြန်ပါတယ်နော်..။ ဂီတာရှိတ်လေးလို့အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ အဖုအထစ်ကောက်ကြောင်းတွေက မြင်သူပုရိသတွေတိုင်းကို ရင်ဖိုလှိုက်မောဖွယ် ညို့အား ပြင်းနေတဲ့နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမ်ုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကတော့ တကယ်ကို စွဲမက်စရာကောင်းလွန်းပါတယ်နော်..။
ဆကျဆီမျောဒယျမလေး နှယျနှယျထှနျးက“ခုတလော အရမျးတှလှေခငျြလာတာ မငျးကွောငျ့မြားလား??..” ဆိုပွီး ကြော့ရှငျးတဲ့အလှတ ရားတှေ အထငျးသားပျေါလှငျနပွေီး မွငျသူတိုငျးကို အသညျးယားအောငျ အခဈြပိုစတေဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိ ဝမြှေထားတာ ဖွဈပါ တယျနျော..။ အဲ့ဒီပို့သျရဲ့အောကျမျှာတော့ ပုရိသပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျကွတဲ့ Comment လေးတှအေပွငျ မိနျးကလေးပရိသတျတှကေပါ သဘောကစြှာ ခဈြခငျအားပေးနကွေတာကိုလညျး မွငျတှရေ့ပါတယျနျော..။
ပရိသတျကွီးရေ.. ပုရိသပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေး ခဈြခငျမှုတှကေို အမြားဆုံးနဲ့အခိုငျအမာဆုံးရရှိထားတဲ့ မျောလျဒယျမငျးသမီး ခြောလေးတှထေဲမှာ ရဈလို့အားလုံးက ခဈြနိုးချေါကွတဲ့ နှယျနှယျထှနျးကလညျး အပါအဝငျပါပဲနျော..။ ညို့အားပွငျးပွီး အခြိုးအစားကတြဲ့ ကောကျကွောငျးအလှတှကေိုပိုငျဆိုငျထားပွီး အသညျးယားစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ဟနျပနျလေးတှနေဲ့လညျး ဖမျးစားတတျတဲ့ ရဈရဈက တော့ တကယျကိုဆိုးနှဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။
သူမရဲ့မခို့တရို့ဟနျပနျပုံရိပျလေးတှကေို အမွဲမြှဝလေရှေိ့တဲ့ ရသျရဈကတော့ အခုတဈခါမှာလညျး အခြိုးအစားကလြှနျးတဲ့ ကောကျ ကွောငျးတှကေို အထငျးသားပျေါလှကယငျနတေဲ့ အမိုကျစားပို့ဈပေး ဓာတျဖမျးထားတဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ အခဈြပိုစပွေနျပါတယျနျော..။ ဂီတာရှိတျလေးလို့အခြိုးအစားကလြှနျးတဲ့ အဖုအထဈကောကျကွောငျးတှကေ မွငျသူပုရိသတှတေိုငျးကို ရငျဖိုလှိုကျမောဖှယျ ညို့အား ပွငျးနတေဲ့နှယျနှယျထှနျးရဲ့ အမျုကျစားပုံရိပျလေးတှကေတော့ တကယျကို စှဲမကျစရာကောငျးလှနျးပါတယျနျော..။